ဘိုးဘွားတွေ ကို အမှည့်ခြွေ နေတဲ့ ကိုဗစ် (ဒီကမ္ဘာမြေ ကနေ ထွက်သွားပါတော့) – Shwe Sar
ဘိုးဘွားတွေ ကို အမှည့်ခြွေ နေတဲ့ ကိုဗစ် (ဒီကမ္ဘာမြေ ကနေ ထွက်သွားပါတော့)
By Shwe SarPosted on November 17, 2020 November 17, 2020
ကျစရာ မျက်ရည်လဲ မကျန်တော့ပါ.. အဘွား ဆန်ပြုတ်လား၊ ငှက်သိုက် လား၊ ကြက်ပေါင်းရည်လား၊ Ensure လား ဘာသောက်ချင်လဲအဘွား.. ဆန်ပြုတ် အရင်သောက်မယ်.. ပြီး ရင် ငှက်သိုက် နဲ့ ကြက်ပေါင်းရည် နဲ့ Ensure သောက်မယ်.. ကျနော်ပြုံးမိ.. Good အဘွားအာ့လိုစားနိုင်လို့ ကောင်းတာမြန်တာ.. ဆန်ပြုတ်လေးကို ငါးကြော်လေးနွှင်ပြီးခွံ့။ စားလို က် တာ ကုန်ရော Fish is better than meat နော်သား Yeah it’s rich of omega3& good for elderly patients Right right ပြောသေးတယ်..
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ သားလေးရယ်.. သားလေးတို့ကျွေးလို့ အဘွားအသက်ရှင်တာ.. နို့မို့ဆို အဘွား ငတ်သေမှာ ဝေ့ကနဲ တက်လာတဲ့ မျက်ရည် အဘွားမမြင်သွားဘူး.. အဘွား သား က ၅၁ နှစ်နဲ့ ဒီလ ၆ ရက်နေ့ကဆုံးသွားတယ်.. အဘွားညီမ နှစ်ယောက်က ဟိုဖက် centre မှာလေ.. ဟုတ်အဘွား.. fighting နော်.. အေးပါ သားရယ်.. I Try အ ဘွား အ သက်ရှင်ချင်သေးလို့ ညကျရင်လဲ ကျွေးနော် သားက ခနနေ Duty ထွက်မှာ သေချာမှာခဲ့မယ်နော်.. Please order them သားရယ်..
စားနိုင်၊သောက်နိုင်တာရယ် ဆရာဝန်‌တွေရဲ့ ၂၄ နာရီမပြတ် ကုသမှုတွေရယ်၊ သူနာပြုတွေ ရဲ့ ပြုစုမှုတွေ ရယ်ကြောင့် မကြာမီအချိန်အတွင်း ဆေးရုံဆင်းရတော့မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလေ။ ခု ဆုံးသွားပြီတဲ့.. အချိန်နဲ့အမျှ ဆိုးသွားစေနိုင်နဲ့ရောဂါ.. နင်အရမ်းရက်စက်တာပဲ ကိုဘစ်ရယ် တကယ်အပြင်ထွက်ပျော်ပါးခဲ့တာ ငါတို့လေ.. ငါတို့လူငယ်တွေကိုကျ အပြစ်မပေးဘဲ အပြစ်မရှိ၊ အိမ်ထဲနေတဲ့ ငါတို့ ဘိုးဘွားတွေကိုမှ လုပ်ရက်တယ်ဟာ တစ်ရက်တစ်ရက် ‌ထွက်သွားကြတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေအကြောင်း.. volunteer တွေ စကားထိုင်ပြောကြရင်း ဖြေမဆည်နိုင်။ မျ က်ရည်တွေလဲ မရှိတော့ပါဘူးဗျာ..
ချစ်သော K Mask
ကစြရာ မကျြရညျလဲ မကနျြတော့ပါ.. အဘှား ဆနျပွုတျလား၊ ငှကျသိုကျ လား၊ ကွကျပေါငျးရညျလား၊ Ensure လား ဘာသောကျခငျြလဲအဘှား.. ဆနျပွုတျ အရငျသောကျမယျ.. ပွီး ရငျ ငှကျသိုကျ နဲ့ ကွကျပေါငျးရညျ နဲ့ Ensure သောကျမယျ.. ကနြျောပွုံးမိ.. Good အဘှားအာ့လိုစားနိုငျလို့ ကောငျးတာမွနျတာ.. ဆနျပွုတျလေးကို ငါးကွျောလေးနှငျပွီးခှံ့။ စားလို ကျ တာ ကုနျရော Fish is better than meat နျောသား Yeah it’s rich of omega3& good for elderly patients Right right ပွော သေး တယျ..
ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ သားလေးရယျ.. သားလေးတို့ကြှေးလို့ အဘှားအသကျရှငျတာ.. နို့မို့ဆို အဘှား ငတျသမှော ဝကေ့နဲ တကျလာတဲ့ မကျြရညျ အဘှားမမွငျသှားဘူး.. အဘှား သား က ၅၁ နှဈနဲ့ ဒီလ ၆ ရကျနကေ့ဆုံးသှားတယျ.. အဘှားညီမ နှဈယောကျက ဟိုဖကျ centre မှာလေ.. ဟုတျအဘှား.. fighting နျော.. အေးပါ သားရယျ.. I Tr y အ ဘှား အ သကျရှငျခငျြသေးလို့ ညကရြငျလဲ ကြှေးနျော သားက ခနနေ Duty ထှကျမှာ သခြောမှာခဲ့မယျနျော.. Please order them သားရယျ..
စားနိုငျ၊သောကျနိုငျတာရယျ ဆရာဝနျ‌တှရေဲ့ ၂၄ နာရီမပွတျ ကုသမှုတှရေယျ၊ သူနာပွုတှေ ရဲ့ ပွုစုမှုတှေ ရယျကွောငျ့ မကွာမီအခြိနျအတှငျး ဆေးရုံဆငျးရတော့မယျလို့ ထငျခဲ့တာလေ။ ခု ဆုံးသှားပွီတဲ့.. အခြိနျနဲ့အမြှ ဆိုးသှားစနေိုငျနဲ့ရောဂါ.. နငျအရမျးရကျစကျတာပဲ ကိုဘဈရယျ တကယျအပွငျထှကျပြျောပါးခဲ့တာ ငါတို့လေ.. ငါတို့လူငယျတှကေိုကြ အပွဈမပေးဘဲ အပွဈမရှိ၊ အိမျထဲနတေဲ့ ငါတို့ ဘိုးဘှားတှကေိုမှ လုပျရကျတယျဟာ တဈရကျတဈရကျ ‌ထှကျသှားကွတဲ့ အဘိုးအဘှားတှအေကွောငျး.. volunteer တှေ စကားထိုငျပွောကွရငျး ဖွမေဆညျနိုငျ။ မြ ကျရညျတှလေဲ မရှိတော့ပါဘူးဗြာ..
ခဈြသော K Mask
Previous post ချစ်သူလေးသားဂန်းရိုက်ပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာရင်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလေးကို ဆိုလာတဲ့ ဘေဘီမောင်
Next post ဆရာ ခိုင်မြဲသာ ကို အားပေးစကားလေးပြောပေးပါအုံး